Izindaba - Umhlahlandlela Wobukhulu Bamasondo Ezimoto: Kubaluleke ngempela
Umhlahlandlela Wobukhulu Bamasondo Ezimoto: Kubaluleke ngempela
Kalula nje, amathayi akho makhulu, imoto yakho izobamba kakhudlwana emgwaqweni. Njengoba ububanzi besondo bukhuphuka, bungahlanganisa indawo engaphezulu yomgwaqo.
Abashayeli abaningi abacabangi kangako ngamasondo namasondo abo ngaphandle kwezimonyo. Kepha, usayizi wamasondo - nosayizi wamathayi owafakayo - kubalulekile. Ukusebenzisa amathayi angafanele kungabiza kakhulu futhi kwesinye isikhathi kube yingozi.
Ingabe Usayizi WeTire Ubalulekile Ngempela?
Kalula nje, lapho isondo lakho likhula ngokwengeziwe, imoto yakho ibambelele kakhulu endleleni. Njengoba ububanzi besondo bukhuphuka, buhlanganisa indawo engaphezulu emgwaqweni. Ngokusho kwe-iSee Cars, lokhu kwanda kokuxhumana nendawo egandaywe ngamatshe kunika imoto yakho okuningi okumele ikubambe, kwenze ukuthi ikwazi ukuyiphatha namandla okuyiqhuba.
Ngakho-ke, ingabe usayizi wesondo unendaba ngempela? Impendulo emfushane ithi: Yebo. Kodwa ingabe usayizi wesondo unendaba? Kuya ngesimo.
Amasondo namathayi akuwona amagama angaguquguqukayo. Amathayi ayingxenye yokusetha kwamasondo. Isibonelo, imoto yakho inosayizi osethiwe wamarimu, kepha ungathenga osayizi abahlukene bamathayi ukulingana lawo malimu, inqobo nje uma phakathi kwamathayi kusayizi ofanele. Ukusho lokhu, imoto enamarimu amakhulu izokwazi ukufaka amathayi amakhulu kunezinye izimoto.
Amasondo Amakhulu = Izikweletu Ezinkulu
Kukonke, amathayi amakhulu namasondo angcono ekwandiseni ukudonsa kwemoto yakho. Kodwa-ke, amathayi amakhulu asho namathegi entengo amakhulu, ngokusho Kwemibiko Yabathengi. Zama ukuthola ibhalansi enhle kakhulu phakathi kwesayizi nebhajethi yakho. Uma ukhetha amasondo amakhulu lapho uthenga imoto yakho, ungahle ungakuboni lokhu kukhuphuka kwentengo ekuqaleni, kepha uma kufanele ushintshe amasondo amakhulu namathayi, uzoba nezindleko eziphakeme zokushintshwa kunomuntu oshayela imoto enezincane amasondo.
Lapho usukhethe usayizi wesondo wemoto yakho, uzofuna ukunamathela kulolo sayizi lapho uthenga okunye. Isizathu salokhu ukuthi isondo elihluke kakhulu lingadida umshini wokubonisa izinga lejubane lakho lize lidale nemonakalo ezinhlelweni zemoto yakho zokulwa namabhuleki kanye nokulinganiswa kohlelo lokuzinza. Lokhu kusebenza ekushintsheni kumathayi amancane namakhulu. Ukushintshela kumathayi amakhudlwana anokuphakama kohlangothini olungafanele kungadala ukulimala kohlelo lokumiswa kwemoto yakho, amasondo, kanye namasondo uqobo, futhi kungabeka engcupheni yokufunda okungalungile kwe-speedometer.
Kodwa-ke, uma ufanisa osayizi bamasondo amakhulu ngobukhulu nosayizi wamathaya asezingeni eliphansi, umshini wokubonisa izinga lejubane lakho ne-odometer akufanele kubone noma yiziphi izinguquko. Lokhu kusethwa kusho ukuthi amathayi akho anezindonga eziseceleni ezimfushane, okusho ukuthi izingodo eziseceleni eziqinile, kanye nethuba eliphakeme lokuqhuma uma ushaya umgodi.
Uma ushintsha amathayi akho, zama ukunamathela kuhlobo nakusayizi ofanayo, njengoba ukuxuba nokufanisa kushiya imoto yakho inemicu ehlukene yamathayi, engadala ama-spinout nokulawula ukulahleka.
Amathiphu Wokuthenga Amarimu Amasha Namathayi Amasha
Umshayeli ojwayelekile kungenzeka angazi kahle ukuthi bafunani lapho bethenga amathayi amasha, kepha inqobo nje uma ugcina imithetho embalwa eyisisekelo engqondweni, ukufaka amathayi namarimu kalula.
Ungabufunda Kanjani Ubukhulu BeTire
Uma ufuna amathayi amasha, uzohlangabezana namagama osayizi afana ne-235 / 75R15 noma i-P215 / 65R15. Lawa malebula angadida uma ungaqiniseki ukuthi uwafunda kanjani, kepha uma usufunde ulimi lwamasondo, acaca ngokwengeziwe.
Ngakwesokunxele kophawu lwe-slash, uzothola izinombolo ezintathu futhi kwesinye isikhathi izinhlamvu. Izinombolo zimelela ukuthi ububanzi bamathayi, ngamamilimitha, ukusuka kuhlangothini lwendlu kuya kohlangothini. Uma inkulu le nombolo, ithaya lithinta umgwaqo ngokwengeziwe.
Uma ubona incwadi ohlangothini lwesobunxele, ibhekisa ohlotsheni lwethaya. Izincwadi ongazibona yilezi:
"P," yesondo lemoto yomgibeli. Le ncwadi futhi ikwazisa ukuthi isondo lenzelwe ukuhlangabezana namazinga e-United States. Lapho ingekho incwadi, kusho ukuthi yenzelwe ukuhlangabezana namazinga aseYurophu. Lezi zinhlobo ezimbili zinamandla okulayisha ahlukile.
"LT," yeloli elincane. Osayizi bamathayi abaqala ngalezi zinhlamvu kuhloswe ukuthi basetshenziselwe amaloli amancane. Bazoba nezincomo eziphakeme ze-psi zokuthatha kangcono ama-trailer nemithwalo esindayo.
"ST," ye-trailer ekhethekile. Osayizi bamathayi anezinhlamvu ezamasondo e-trailer kuphela.
Sisebenzisa ithayi elingu-P215 / 65R15 njengesibonelo, singabona ukuthi leli thayi elemoto yomgibeli futhi inobubanzi obungu-215-millimeter.
Ngakwesokudla kophawu lwe-slash, uzothola izinombolo ezimbili, incwadi, nezinye izinombolo ezimbili. Isethi yokuqala yezinombolo imele isilinganiso sesici sokuphakama kwesondo kububanzi baso. Esibonelweni sethu se-P215 / 65R15, lezo zinombolo zingama-65, okusho ukuthi ukuphakama kohlangothi lwethayi ngu-65% ubukhulu njengobubanzi besondo. Uhlamvu oluphakathi ohlangothini lwesokunene lwe-slash lukutshela ngendlela yokwakhiwa kwesondo futhi luvame ukuba u- “R,” noma i-radial. Lokhu kusho ukuthi izingqimba zamathayi zihamba ngokukhululekile kulo.
Inombolo yokugcina ibalulekile, njengoba ikutshela ukuthi isondo lilingana nosayizi onjani. Esibonelweni sethu, le nombolo ingu-15, okusho ukuthi isondo lilingana nesondo elinobubanzi obungu-15 intshi.
URayone uchaza ukuthi kwesinye isikhathi, kwamukelekile ukuba namathayi namarimu angalingani ngobukhulu amasondo angaphambili nangemuva, abizwa ngamathayi amile. Imvamisa uzokubona lokhu ngezimoto zemisipha, njenge-Mustang, i-Challenger neCamaro. Isizathu esenza lokhu kusebenze ukuthi amasondo angemuva akudingeki ajike njengoba kwenza amasondo angaphambili.
Ukukhula komphetho wakho, kuzoba nzima kakhulu futhi kubize ukuthenga amathayi amasha. Uma usuqale ukusebenzisa amathayi amakhulu, ungathola ukuthi bambalwa kuphela abakhiqizi bamathayi abenza usayizi wakho. Kodwa-ke, le nkinga ivame ukugwenywa ngemoto emaphakathi lapho kuthengiswa khona izimoto.
Amasondo amakhulu ngokuvamile asho amathayi amancane. Amathayi kufanele abe mancane ngokwanele ukuba anele ngaphakathi kwesondo lakho kahle. Uma ithayi lakho liba lincane, kungancipha kakhulu ukuthatha imigwaqo ewumqansa nemigodi, okungaholela ekushayweni umoya.
Amasondo namathayi yizinto ezibalulekile emotweni yakho. Yize lokho kungabonakala kucace kancane, abashayeli abaningi abacabangi amasondo abawakhethele izimoto, okungaholela ezinkingeni eziningi ezingafuneki. Yazi imoto yakho futhi ugweme ukwenza amaphutha amabi esondo ukuqinisekisa ukuthi amasondo akho aphephile futhi unikeza imoto yakho amazinga amahle kakhulu okudonsa okungenzeka.